အပြေးသမားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခု (သို့မဟုတ်)ခြေဖဝါးပြားခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အပြေးသမားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခု (သို့မဟုတ်)ခြေဖဝါးပြားခြင်း
ဧပြီ 9, 2019 Phattarapon Atimetin, M.D.
ခြေဖဝါးပြားနေတဲ့သူတွေဟာ ခြေထောက်အတွင်းဘက်ကို ခေါက်သွားတတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ Overpronation လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြေးနေစဉ်အတွင်း ခြေထောက်ပေါ်ကို ဝန်ပို ပိ သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒူးနာ နဲ့ ခါးနာ ဖြစ်စေဖို့လည်း အန္တရာယ် ပိုရှိပါတယ်။
ခြေဖဝါးပြားနေခြင်းဟာ အပြေးသမားတွေအတွက် သိပ်ကြီးကြီးမားမား အန္တရာယ်မရှိပါဘူး လို့ သုတေသနသမားတွေက မည်မျှပင်ဆိုစေကာမူ ထိခိုက်မှု ဟာ ထပ်တလဲလဲ ဒါမှ မဟုတ် အမြဲလိုလို ဖြစ်နေမယ်၊ မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုမျိုးလည်း မရဘူးဆိုရင် ရေရှည်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခြေဖဝါးပြားအပြေးသမားများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး လှုပ်ရှားမှုအထိန်းပါတဲ့ အပြေးဖိနပ်တွေဟာ အဆိုပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနဲ့ နာကျင်မှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အပြေးသမားအများစုဟာ “ခြေဖဝါးပြားခြင်း” ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ကြားဖူးနား၀ ရှိကြပါတယ်။ ခြေဖဝါး ပြား နေခြင်းကြောင့် ပြေးနေစဉ်အတွင် ခြေခေါက်လဲနိုင်ခြင်း နဲ့ ခြေထောက်တွေ အပေါ် ဝန်နဲ့အား မမျှတဲ့ ဝိတ်တွေ ကျရောက်နိုင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ နာကျင်မှုနဲ့ ဒဏ်ရာရမှုတွေဆီကို ဦးတည်လာတော့တာပါပဲ။
ကိုယ့်ခြေဖဝါး ပြား မပြား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ ခြေရာကောင်းကောင်းထင်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်ညီ ဒါမှမဟုတ် စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်ကို ရေစိုနေတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ တက်ရပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အစိုနည်းနဲ့ စမ်းတယ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခြေရာမှာ ခြေဖဝါးအလယ်ပိုင်းကိုပါ မြင်နေရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူ ခြေဖဝါး ပြားနေပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပေတော့။ သေချာချင်ရင် ဆရာဝန်ဆီသာ ပြေးပေတော့။
ပုံမှန် ခုံးခြင်း – ပုံမှန် ခြေထောက်၊ ခြေကျင်းဝတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ အလယ်အလတ်စား ခြေဖဝါး ခုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ပုံမှန် ခြေထောက်အကောင်းတစ်ချောင်းလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ခြေဖဝါးခုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဝိတ်ကို ထိန်းထားပြီး ခြေထောက်ပေါ်ကို မျှမျှတတ ကျရောက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပုံမှန်ခြေဖဝါးခုံးရှိသူတိုင်းဟာ ဘယ်အမျိုးအစားဖိနပ်ကိုမဆို စီးနိုင်ပါတယ်။
ခြေဖဝါး ပြားခြင်း – ခြေဖဝါးအလယ်ပိုင်းဧရိယာကို ခြေရာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပြီးတော့ အလယ်နားမှာ ခွက်ဝင်သွားတဲ့ လက္ခဏာမရှိဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းလေးပဲ ခွက်ဝင် နေမယ်ဆိုရင် အဲဒါ ခြေဖဝါး ပြားတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ခြေဖဝါးပြားနေတဲ့သူတွေဟာ ခြေထောက်အတွင်းဘက်ကို ခေါက်သွားတတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ Overpronation လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြေးနေစဉ်အတွင်း ခြေထောက်ပေါ်ကို ဝန်ပို ပိ သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒူးနာ နဲ့ ခါးနာ ဖြစ်စေဖို့လည်း အန္တရာယ် ပိုရှိပါတယ်။
ပုံမှန်ထက် ပို ခုံးခြင်း – ခြေဖဝါး အခုံးများရင် (ပုံမှန်ထက် ပိုခုံးရင်) ခြေထောက် အပြင်ဘက်ကို ခေါက်လဲတဲ့ ပြဿနာ (dupinate) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုခုံးတဲ့ ခြေဖဝါးပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ ခြေရာ တွေဟာ ခြေဖဝါးအလယ်မှာ ကြီးမားတဲ့ အချိုင့်ကြီးတစ်ခု ရှိနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒီခြေထောက် ပိုင်ရှင်တွေဟာ ခြေဖဝါးကုပ်အားမှာ အားနည်းမှု ရှိတတ်ပြီး ခြေကျင်းဝတ် ထိခိုက်စေဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။
ခြေဖဝါးပြားခြင်းဟာ အပြေးသမားတွေကို တကယ်ပဲ ဒုက္ခပေးသလား။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ KK အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဆေးရုံက Jasper W.K. Tong ရဲ့ သုတေသနအရ ခြေဖဝါးပြားတဲ့ အပြေးသမားတွေဟာ ပုံမှန်ခြေထောက်ပိုင်ရှင်တွေထက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ချေ နည်းနည်းလေးပဲ ပို တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ Queen Mary University, London က Bradley Neal ကတော့ ခြေဖဝါးပြားခြင်း ဟာ အပြေးသမားများကြား ထင်ရှားတဲ့ ညို့သကျည်းနာကျင်မှု ၊ patellofemoral pain syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ဒူးခေါင်းအတွင်းက ပေါင်ရိုး၊ ခြေသလုံးရိုးနဲ့ ခုံညင်းရိုး သုံးခုဆုံရာကြားမှာ နာကျင်တဲ့ဝေဒနာ ဖြစ်စေမှု စတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပေမယ့် အခြားနေရာတွေဖြစ်တဲ့ ခြေကျဉ်းဝတ်တို့ ခြေထောက်တို့မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ အပေါ်မှာတော့ သက်ရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေက ခြေဖဝါးပြားခြင်းဟာ အပြေးသမားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ မဆိုင်ဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် ထပ်တလဲလဲ လည်း ဖြစ်နေမယ်၊ မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ ကုသမှု လည်း မရဘူး / မပြုလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်အရှည်မှာ ကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ခြေဖဝါး ပြား တာနဲ့အမျှ ခြေထောက်နဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေဟာ အတွင်းဘက်ကို လည်သွားတတ်ပြီး ဖနောင့်ပေါ်ကို ဖိအား များများကျရောက်စေတာကြောင့် ခြေသလုံးနဲ့ ခြေဖနောင့် မှာ ဒဏ်ရာတွေရစေဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ခြေပြားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်တာ်တော်များများက ဒူးအတွင်းပိုင်းတွေပေါ် ကျရောက်လေ့ရှိပြီး အဲဒီအချက်က ဒူးနာခါးနာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Accessories and supports to help people with flat feet ခြေဖဝါးပြားသူများအတွက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားကို ရွေးပါ – ခြေဖဝါး ပြားသူတွေဟာ အောက်ခံခုံ ပျော့တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို ရွေးသင့်တယ်။ သူက ခြေဖဝါးခုံးနဲ့ ခြေထောက်ကြွက်သားအကြောကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဖနောင့်ကိုလည်း ငြိမ်စေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခြေအတွင်းဘက် ခေါက်လဲတာနဲ့ ခြေပွတ်တိုင်လည်တာကို ထိန်းပေးနိုင်တဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်နဲ့ နောက်ဘက်မှာ အကာတွေပါတဲ့ ဖိနပ်မျိုးကိုလည်း ရွေးသင့်တယ်။
ခြေထောက်နဲ့ အလိုက်သင့် ဖြစ်စေမယ့် ဖိနပ်အတွင်းခံပြားလေးတွေကို ရွေးချယ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ခြေထောက်အောက်ဖက်အတွင်းပိုင်းက တစ်ရှုးတွေကို အားဖြည့်ထောက်ပံ့ထားပြီး ခြေဖဝါးအောက်ပိုင်းနဲ့ ဖနောင့်ကို တွဲဆက်ပေးထားတဲ့ တစ်ရှုးအမြှေး ရောင်ရမ်းခြင်း (plantar fascilitis) ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေက ခြေထောက် ကို အထောက်အကူပေးပြီး တွန်းအားတိုက်အားတွေကို လည်း လျော့ပါးစေဖို့ ကူညီပါတယ်။ ပြေးနေစဉ် သို့မဟုတ် လမ်းသွက်သွက်လျှောက်စဉ် ခြေခေါက်မလဲအောင် လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ဆီလီကွန်ပါတဲ့ ဖိနပ်တွေ၊ ဖိနပ် အတွင်းခံအချပ်တွေ၊ ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ဖိနပ် အတွင်းခုံများ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထည့်သွင်းချုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အပြေးသမားများဟာ စီးနေကျ အတွင်းခုံပါဖိနပ်၊ တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့် ခြေထောက်ပုံစံနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာသေချာတဲ့ ဖိနပ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်စီးနင်းသင့်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးအပြားလွန်သမားတွေ အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ချွတ်ယွင်းမှု တိတိကျကျ စစ်ဆေး ရှာဖွေဖို့၊ အကောင်းဆုံးနဲ့ဘေးအကင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရေးမှာ အကူအညီပေးနိုင်မယ့် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဆွဲဆန့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း – အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခြေဖဝါး အနည်းငယ်ပြား နေသူတွေအတွက် အကူအညီ ပေးပါတယ်။ လက်တွေကို နံရံပေါ်မှာကပ်ထားပြီး ကိုယ်ကို ရှေ့ကို ကိုင်းပါ။ ပြီးရင် ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုရှေ့ကိုထုတ်လိုက်ပါ။ ရှေ့ခြေဖနောင့်ကိုအပြားလိုက်မြေကြီးပေါ်သို့ချ၍ ဒူးကိုကွေးပါ။ နောက်ခြေကို ဆန့်ပြီး ဒူးကိုအဖြောင့်ထားပါ။ နောက်ခြေရဲ့ ခြေချောင်းများဟာ ရှေ့ ခြေရဲ့ ဖနောင့်နှင့် လားရာတူ တစ်တန်းတည်းဖြစ်ပါစေ။ အဲဒီနောက် နောက်ခြေဖနောင့်ကို မြေကြီးပေါ်ဖိချပြီး နောက်ခြေထောက်ဆန့်ထုတ်ခြင်းကို ၁၅စက္ကန့်မှ ၃၀ စက္ကန့်ကြာအောင် ထိန်းထားပါ။
ခြေဖဝါးပြားတဲ့ အပြေးသမားတွေအတွက် ရှူးဖိနပ်
ခြေဖဝါးပြားတဲ့ အပြေးသမားတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အပြေးဖိနပ်ကို ရွေးချယ်စီးနင်းခြင်းက ခြေဖဝါးအတွင်းဖက် နာကျင်မှုနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိမှုကို လျော့ပါးစေမှာဖြစ်တဲ့ပြင် တခြား အရွတ်ဆိုင်းတွေ၊ ဒူးတွေ၊ တင်ပဆုံအဆစ်တွေနဲ့ နောက်ကျော စတာတွေကိုလဲ အလားတူ အန္တရာယ်များမဖြစ်ရအောင် အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ အရေးကြီးတာက
အလှည့်အပြောင်းမှာ လဲမကျအောင် တည်ငြိမ်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ရပါမယ်။ တကယ်တော့ ပြေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခြေထောက်ရဲ့ အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အထောက်အပံ့လိုပါတယ်။
မမာလွန်း မပျော့လွန်းတဲ့ အောက်ခံခုံပါတဲ့ ဖိနပ်ကိုရွေးရပါမယ်။
အားလွန်ပြီးရုတ်တရက် လဲ မသွားနိုင်အောင် ထူပြီး အခုအခံပါတဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို ရွေးရပါမယ်။
ဖိနပ်ဦးဟာ ကျဉ်းလွန်း/ချောင်လွန်းခြင်း မဖြစ်ရဘူး၊ ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ အတွင်းမှာ ခြေချောင်းတွေ လှုပ်လို့ ရ ရမယ်။
ခြေထောက်ပေါ်ကို ဘော်ဒီဝိတ်နဲ့ ဖိအားရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ပြန့်သွားစေခြင်းဖြင့် ဖိအားကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ ဖနောင့်ဒေါက်ပါတဲ့ အောက်ခံခုံကိုသုံးရန်။
အထူးသဖြင့် ပြေးနေချိန် နာကျင်မှုနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို လျှော့ချနိုင်စေဖို့ ခြေဖဝါးပြားတဲ့ အပြေးသမားတွေအတွက် ပုံစံထုတ်ထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုအထိန်းပါတဲ့ ဖိနပ်တွေကို ရွေးချယ် အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြေးဖို့အတွက် အထူးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အပြေးဖိနပ်တွေကို ရွေးမယ်ဆိုရင်.. ခြေဖဝါးပြားတဲ့ အပြေးသမားတွေအနေနဲ့ အခြား ရိုးရိုးဖိနပ်တွေ ဝယ်တဲ့အခါ ရွေးသလိုမျိုးပဲ ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိနပ်က ခြေထောက်ကို ညှစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာမျိုး၊ ဖိနပ်ပေါက်တာမျိုး၊ ခြေထောက်နာတာ ခြေခေါက်လဲနိုင်တာ စတာမျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. အမျိုးအစားကောင်းပြီး တာရှည်ခံမယ့် ဖိနပ်မျိုး၊ ချုပ်ရိုး ချုပ်သား၊ အတွင်းအပြင်သုံးထားတဲ့ ဖိနပ်သား အမျိုးအစား တွေကိုကြည့်ပြီး ရွေးပါ။
၂. ခြေထောက်ဟာ တစ်နေ့လုံး သွေးလျှောက်နေတဲ့အပြင် တစ်ကိုယ်လုံး အလေးချိန်ကို ထမ်းထားရတာကြောင့် ပြည့်ပြီးကားလာနိုင်မယ့် ညနေပိုင်းအချိန်များမှာ ဖိနပ်ကို စီးကြည့်ပါ။ ဒါက ဖိနပ် ကြပ်ကြပ်ကြီးကို မဝယ်မိအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၃. ဖိနပ်ဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် အစမ်း စီး ကြည့်ပါ။ ခြေအိတ်နဲ့ စီးကြည့်ပါ။ သိပ်ကြပ်ခြင်း/ချောင်ခြင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။ ရှေ့ တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်ကြည့်ပါ။ ခုန်ကြည့်ပါ။ ထိုသို့ လုပ်နေစဉ် ဖိနပ် လျှောထွက်ခြင်း ကျွတ်ထွက်ခြင်းများ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် သင့်အတွက် ဖိနပ်ကောင်းတစ်ရံ ရပါပြီ။
အပြေးသမားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေထဲကတစ်ခု (သို့မဟုတ်)ခြေဖဝါးပြားခြင်း အပြေးသမားအများစုဟာ “ခြေဖဝါးပြားခြင်း” ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ကြားဖူးနား၀ ရှိကြပါတယ်။ ခြေဖဝါး ပြား နေခြင်းကြောင့် ပြေးနေစဉ်အတွင် ခြေခေါက်လဲနိုင်ခြင်း နဲ့ ခြေထောက်တွေ အပေါ် ဝန်နဲ့အား မမျှတဲ့ ဝိတ်တွေ ကျရောက်နိုင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ နာကျင်မှုနဲ့ ဒဏ်ရာရမှုတွေဆီကို ဦးတည်လာတော့တာပါပဲ။